Child receiving polio vaccination (2004 photo)
For more than a decade now, Zimbabwe has depended mainly on aid agencies and foreign donors in its health care sector. With official figures showing that 100 children die every day in Zimbabwe, the immunization program is seen as the most cost-effective way to reduce child illness and child mortality.
Henry Madzorera, Zimbabwe’s health minister, hopes Japan and the international community will continue to provide funding to Zimbabwe.
Zimbabwe's health care sector fell into shambles several years ago, after years of political turmoil and the collapse of the economy.
Finance Minister Tendai Biti has complained on several occasions that proceeds from diamond sales are not reaching the treasury. He said he fears that President Robert Mugabe’s ZANU-PF party is keeping the money to fund future election campaigns, at the expense of ordinary Zimbabweans.